Jamaahiirta Liverpool Oo Ka Jawaabay Meelaha Uu Jurgen Klopp U Baahan Yahay In Uu Kooxdiisa Ka Soo Xoojiyo Suuqa Xagaagan. - Gool24.Net
Meelaha ay Liverpool uga baahan tahay in ay suuqa xagaagan iska soo xoojiso ayaa wax laga waydiiyay jamaahiirta Liverpool.
Liverpool ayaa xili ciyaareedkan hal dhibic ku seegtay koobka Premier league waxayna sanadkii labaad oo xidhiidh ah joogaan finalka Champions League.
Laakiin wali jamaahiirta kooxda Liverpool ayaa doonaya in ay kooxdoodu suuqa u gasho ciyaartoy kale si uu Jurgen Klopp xoojin ugu sameeyo boosas gaar ah.
Liverpool ayaa xagaagii hore la soo saxiixatay ciyaartoyda kala ah Alisson Becker , Fabinho , Naby Keita iyo Xherdan Shaqiri kuwaas oo door fiican xili ciyaareedkan Anfield ku soo yeeshay.
Alex Oxlade-Chamberlain oo dhaawac waqti dheer ah ku maqnaa ayaa la filayaa in uu xili ciyaareedka cusub booskiisa u dagaalami doono balse taasi jamaahiirta Reds uma diidayso in ay kooxdy ciyaartoy cusub keento.
Daniel Sturridge iyo Alberto Moreno ayaa la filayaa in ay si xor ah ku bixi karaan dhamaadka xili ciyaareedkan halka kulan uga hadhsan yahay taas oo badalkeeda loo baahan karo.
Haddaba wargayska Liverpool Echo ayaa jamaahiirta Liverpool waydiiyay boosaska ay inta ugu badan Liverpool xagaagan u baahan tahay in ay iska soo xoojiso.
Aragtiyo badan oo marar badan isku dhaw ayay jamaahiirta Liverpool su’aashan kaga jawaabeen iyaga oo soo doortay magacyada ciyaartoyda ay doonayaan in uu Klopp la soo saxiixato.
U Soo bixitaankii Liverpool ee Finalka Champions League
Paul Harper oo taageere u ah Liverpool ayaa soo qoray: “Waxaa ku haboon ciyaartoy hal abuure ah, Fekir ama Ziyech”. Waa Nabil Fekir oo hore Liverpool heshiis ula gaadhay balse uu burburay iyo xidiga Ajax ee Hakim zeyech.
Karim Moustafa El-Araby ayaa isna soo qoray: “Doorka Lambar 10-ka oo ah Ziyech ama Brandt oo wada jir ku ah 45 milyan gini . Maskax uma baahna”.
Kevin Ignatius ayaa isna fikradiisa ku dhiibtay: “Khadka dhexe waa horumarin muhiim ah oo loo baahan yahay, weerarkeena iyo difaaceenu aad ayay u xoogan yihiin, waxaan dareensanahay dhexe hore oo weerarka ah in ay doorashada ugu saxsan tahay”.
Jim Roberts ayaa isna soo qoray: “Waxaa loo baahan yahay qof sida Dyabala oo kale ah kaas oo hal abuur leh, doorka weerarka ka ciyaari kara laakiin sidoo kale buuxin kara booska Bobby haddii loo baahdo”.
“Waxaynu u baahanahay gool dhaliye heer sare ah, ma aha qof weerarka uun sameeya. Difaac bidix, khad dhexe oo aad xariif u ah sida Neves ama Maddison ama qof ka sii fiican haddii ay suurtogal tahay iyo goolhaye labaad” ayuu fikradiisa ku cabiray Brian Finnegan.
SIDOO KALE AKHRISO: David Luiz Oo Xaqiijiyay Hadaladii Ay Isdhaafsadeen Frank Lampard Ee Keentay Inuu Ku Biiro Arsenal
Taageeraha kale ee Liverpool ee Tsegai Berie ayaa isna soo qoray: “Difaac bidix, difac midig, khad dhexe oo hal abuur u ah sida Lambar 10-ka iyo gool dhaliye saafi ah kas oo la tartami kara Firmino”.
Haddaba akhriste, haddii aad Liverpool taageere u tahay, fikradaha halkan aanu idiinku soo gudbinay miyaad la qabtaa taageerayaashan mise meelo kale oo ay Reds u baahan tahay in laga soo xoojiyo ayaad aragtaa?
Waxa aan ahay taageere liverpool ah Waxa aan jeclaan lahaa In liverpool laga xoojiyo khadka dhexe oo weerar ah iyadoo ay sooracda difaac midig iyo mid bidix iyo goolhaye labaab oo fiican kaasoo liverpool Ka saarikara dhibka hadii dhawac Soo gaadho Allison